အင်းဘဲကြီး ရှေးဟောင်းစေတီများ ဆီ
ရှိန်းမကား သွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ အင်းဘဲကြီးရွာ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တိတိကျကျဆိုရရင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝက်လက်မြို့နယ်ထဲ က အင်းဘဲကြီးရွာ ပေါ့။ အဲ့ဒီရွာရဲ့ အဓိက လမ်းမကြီးဟာ ရှိန်းမကားလမ်းမကြီးပါ။ ဝက်လက်မြို့ ကနေ ရှိန်းမကား ကိုဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီရွာ ကို ဝက်လက်မြို့ကနေ ရှိန်းမကားသွားသူတိုင်း ဖြတ်သန်းမြင်တွေ့ဖူးကြပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးမြင်ကွင်းက ပုဂံဘုရားတွေလို မြေသားအုတ်စေတီပုထိုးအဟောင်းလေးတွေ အစုလိုက် ရှိနေတဲ့မြင်ကွင်းပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၉ တုန်းက ကျွန်တော် ရွှေဘိုကနေတဆင့် ရှိန်းမကားကို အလည်သွားခဲ့တာမို့ ဝက်လက်မြို့ကနေ လမ်းခွဲတဲ့ ရှိန်းမကားလမ်းအတိုင်း သွားခဲ့ရတာကြောင့် အင်းဘဲကြီးရွာ နဲ့ အဲ့ဒီရွာက ရှေးဟောင်းစေတီအစုလေးတွေကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်လည်း ရှိန်းမကားဘက် အလည်သွားတော့ လမ်းမှားပြီး ဝက်လက်မြို့ထိရောက်လာပြီး ရှိန်းမကားလမ်းအတိုင်း ဝင်ခဲ့ရတာမို့ တစ်ခါ ထပ်မြင်ခွင့်ရပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ မူလရှေးဟောင်းစေတီတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်နေတာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေလည်း ရှင်းလင်းထားပြီး သေချာပြင်ဆင်နေကြတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
ရွာခံသက်ရွယ်ရသူတွေတောင် သေချာ မသိနိုင်လေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေနဲ့ ဒီစေတီတွေ ရှိနေခဲ့တယ်တဲ့လေ။ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလေမလဲ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မပြောနိုင်ကြသေးပါဘူး။
သူ့ရဲ့ သမိုင်းက ဘယ်လိုလဲ?
ကျွန်တော့်မှာလည်း ဒီအကြောင်းရေးဖို့ တောင်ပြေး မြောက်ပြေးပါပဲ။ ကံမကောင်းချင်တော့ ဒီရှေးစေတီတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားဖို့လေ့လာပြုစုနေတဲ့ ရွှေညောင်တော်ကျောင်းတိုက် က ဆရာတော်ကလည်း ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ပဲ စစ်ကိုင်း ရောက်နေတယ်ဆိုလား ရွာလူကြီးတွေဆီက ကြားခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့လည်း ဆုံရသမျှလူကြီးသူမတွေနဲ့ အင်တာဗျူးလေး လုပ်တော့ ဒီရှေးဟောင်းစေတီတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ ယူဆရတာတွေက ဦးကုလား ရဲ့သမိုင်းကျမ်းစာအုပ်မှာ ပါဝင်တယ် ဆိုတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ လောက်ကတည်းက အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဒေသမှာလည်း မိုးညှင်းမင်းတရားကြီး လာရောက်နေထိုင်ဖူးတယ်လို့ ယူဆချက်လည်း ရှိတာကြောင့် ဒါတွေဟာ ဆက်စပ်နိုင်မယ်လို့ ရွာလူကြီးတချို့ကတော့ ယုံကြည်ကြတယ်။ စာအုပ်ကအစ သေချာပြင်ဆင်နေတယ်ကြားရတော့ နောက်တစ်ခါများကြုံခဲ့မှပဲ သေချာလေ့လာခွင့်ရတော့မယ် ထင်ပါတယ်။
ထင်မှတ်မထားဘဲ လယ်ကွင်းပြင်တွေကြား အုတ်ပုံတွေ၊ အနည်းငယ်သာ ပြိုကျနေတဲ့ အုတ်စေတီတွေ၊ ထိလိုက်တာနဲ့တင် အိခနဲကျသွားတဲ့ အုတ်စေတီတွေ၊ အတွင်းမှာ ပြိုပျက်နေတဲ့ ဆင်းတုတော်ကြီးတွေ ပေါ်ထွက်နေတဲ့ စေတီပြိုတွေ၊ ရှေးဘုရားတွေကို ပြောင်းလဲ အပူဇော်ခံထားလို့ အတွင်းမှာ ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတဲ့ စေတီဟောင်းတွေ အမျိုးမျိုးကို လေ့လာဖူးမြင်ကြရပါတယ်။
ပေါ်တော်မူဘုရာကြီး ကို သွားဖူး လို့ စေတီပြုပြင်နေသူတွေက ညွှန်းလို့ သွားကြည့်တဲ့အခါ ဂူစေတီ ပြိုပျက်ပေမဲ့ အကောင်းအတိုင်းရှိနေသေးတဲ့ ထိုင်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးကို သပ္ပါယ်စွာ ဖူးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ခု မြင်တွေ့ရတဲ့ ဂူစေတီရဲ့ ပုံစံတွေကတော့ တကယ့်ကို ပုဂံမှာ မြင်ရတဲ့ ဂူစေတီတွေရဲ့ အသွင်မျိုးတွေပါပဲ။ ဘယ်ခေတ်လက်ရာဖြစ်မလဲဆိုတာ အတိအကျလေ့လာလိုက်စားသူတွေကတော့ ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီး ခန့်မှန်းပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့စေတီတွေကိုတော့ အထူးပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်လို့ ခန့်မှန်းဖို့ ခက်နိုင်ပါတယ်။ တချို့စေတီတွေမှာ အုတ်တိုင်တွေကိုပါ တွေ့ကြရပါသေးတယ်။ ရွှေကူကြီးစေတီကိုတော့ အသေအချာပြင်ဆင်ထားပြီး ဆေးသင်္ကန်းတွေလည်း ကပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုတော်တွေကိုတော့ စေတီတဆူရဲ့ အတွင်းဘက်မှာ သော့ခတ်ထိန်းသိမ်းထားတာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဇိဝိတပါလစေတီ က ဦးခေါင်းတော်ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆင်းတုတော်ကြီးနဲ့အတူ
အနီးအနားမှာရော၊ မနီးမဝေးမှာရော ရှိနေတဲ့ စေတီပေါင်း ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ရွှေကူကြီးဘုရားရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့ ရွှေညောင်တော်ကျောင်းတိုက် ရှိပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၄ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ထားသည်ဆိုတဲ့ မုခ်ဦးကြောင့် ဒီကျောင်းတိုက်ဟာလည်း ဒီနှစ်ဝန်းကျင်မှာ တည်ထားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါဆို ကုန်းဘောင်ခေတ်လို့ပဲ ဆိုနိုင်ဦးမလားမသိ။ ကျောင်းတိုက်မှာ မှန်စီကပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရလို့ ကုန်းဘောင်ခေတ်လို့တော့ သေချာဆိုနိုင်တဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာ ကျောက်စာဟောင်းတစ်ချပ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရှေ့မှာ ရေးခဲ့သလိုပါပဲ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝက်လက်မြို့ ကနေ တဆင့် ရှိန်းမကားလမ်းအတိုင်းသွားရင် လမ်းတစ်ဝက်ကျော်လောက်မှာ လမ်းမကြီးဘေးတင် မြင်တွေ့ဖူးမြင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးစီးလုနီးပါးစေတီတစ်ဆူနဲ့ ထီးတော်တင်ပွဲ ဖိတ်ကြားကြော်ငြာ
ရှေးဟောင်းစေတီ နဲ့ အဆောက်အဦးတွေ စိတ်ဝင်တစားလေ့လာလိုသူတွေအတွက်တော့ အင်းဘဲကြီးရွာက ရှေးဟောင်းဘုရားတွေဟာ လေ့လာချင်စရာတစ်ခုဖြစ်နေမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပထမတစ်ခေါက် မြင်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ခု နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်မှ လေ့လာနိုင်ခဲ့တာပါ။ မန္တလေးက တကာ မိသားစုတစ်စုနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ပြုပြင်နေမှုက အားတက်စရာဖြစ်သလို၊ တစ်ဘက်ကလည်း ရှေးပုံစံအတိုင်းထားသင့် မထားသင့်၊ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်သင့် မပြင်ဆင်သင့်ကလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခရီးသွားစာဖတ်သူတွေ လမ်းကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင် လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
အားလုံးပဲ အစဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံ ကျန်းမာပြည့်စုံပျော်ရွှင်စွာ ခရီးသွားနိုင်ကြပါစေ။
ကျွန်တော်၏ တိုက်ရိုက် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ ဤဆောင်းပါးနှင့် ဓါတ်ပုံများအား မည်သူမှ မိမိ၏ အကောင့်တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် မီဒီယာ၊ Website နှင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်များတွင်ဖြစ်စေ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြခြင်းများကိုတော့ လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
Photo :: Thiha Lu Lin, Yamin Cho
Camera :: SONY Alpha 7II with 16-35mm Lens, Samsung Galaxy Note 10+
ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ ကျိုက်ထီးရိုးတောင် ခြေလျင်တက်စို့
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာရွာလေးရှိရာ Shirakawago
တမူထူးမဲ့ လွယ်တမူ သဘာဝလိုဏ်ဂူ ဆီ
My name is Thiha who aspires to travel and learn as much as possible. I work asatravel blogger, author, event host, master of ceremony and brand endorser.
© 2020 Idea Landmark Myanmar